‘रणवीर’ खेल्न किन राजी भइन् सुबेक्षा खड्का ? « Ramailo छ
‘रणवीर’ खेल्न किन राजी भइन् सुबेक्षा खड्का ?
सन् २०१२ मा मिस इन्टरनेशनल नेपालको उपाधी जितेकी सुबेक्षा खड्कालाई पहिले फिल्म अफर नगरिएको होइन तर फिल्म ’रणवीर’ मार्फत डेब्यु गर्दैछिन । फिल्म खेलाउन सुबेक्षालाई धेरै मेकर्सको प्रस्ताव गरे ।
‘मलाई फिल्ममा आउँन मन नलागेको होइन तर खोजिएको जस्तो फिल्म अफर आएँन’, सुबेक्षा भन्छिन्, ‘म मिस नेपालमा सेकेन्ड रनरअप भएसँगै मलाई अफर राम्रै आएको थियो मैंले धेरै मान्छेलाई भेटे पनि । तर मलाई चित्त बुझेन । उनलाई फिल्म खेल्न चाहिं मन थियो रे । ‘मसँग काम गर्ने साथी सर्कलले पनि मलाई भन्नु हुन्थ्यो तर सहि समयको पर्खाइमा थिए । रणवीरको अफर आएपछि स्टोरी सुने र टिमले पनि चित्त बुझ्यो । यसैले फिल्म गरेकी हुँ’, उनको भनाई छ । ‘रणवीर’को यो गीत हेर्नुस् :
गत वर्ष सन् २०१८ को सुरुवातदेखि फिल्म ‘रणवीर’मा जोडिएर नेपाली फिल्ममा प्रवेश गरेकी सुबेक्षालाई यतिबेला सम्भावना बोकेको अनुहारको रुपमा हेरिएको छ । एक्सन लभ स्टोरी तथा एक्सन फिल्ममा सुबेक्षासँगै सुशील सिटौला, सुपुस्पा भट्ट, प्रशान्त ताम्राकार, टिका पहाडी, नरेश पौडेल, हरिहर शर्मा लगायतको अभिनय रहेको छ ।
कथा, पटकथा, संवाद तथा निर्देशन गोविन्द सिंह भण्डारीको रहेको फिल्मलाई गोमा बिष्ट थापा र दिपेन्द्र रेग्मीले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका छन् । यसमा फिल्ममा महेश पौडेलको छायांकन, कृष्ण भण्डारीको सम्पादन, चन्द्र पन्तको द्वन्द, रामजी लामिछाने र सुरेन्द्र बसेलको कोरियोग्राफी छ । फिल्म माघ १८ मा रिलिज हुँदैछ ।